नेकपा फुटेकामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन्तित, मिलेरै अगाडि बढ्न सुझाब – रुपान्तर
मुख्य पृष्ठसमाचारनेकपा फुटेकामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन्तित, मिलेरै अगाडि बढ्न सुझाब
नेकपा फुटेकामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन्तित, मिलेरै अगाडि बढ्न सुझाब
कपा २ चिरा भएको अवस्थामा नेपाल आएको उत्तरी छिमेकी चीनको विशेष टोलीले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएको छ । नेपालमा कम्युनिस्ट शक्ति फुटेकामा चिन्ता लागेको आफ्ना राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन्देश टोलीले हरेक भेटमा सुनाइरहेको छ ।
राष्ट्रपतिदेखि नेकपाका नेतासामु टोलीको नम्र जिज्ञासा छ, ‘नेकपा किन फुट्यो ? यसको फेरि मिल्ने विन्दु छ कि छैन ? प्रतिनिधिसभा विघटन अब के हुन्छ ?’ टोलीले आइतवार र सोमवारसम्म विभाजित दलका प्रमुख नेतागणसँग भेटघाट भ्याइसकेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौ नेतृत्वको विशेष टोलीले आइतवार पहिलो भेट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शुरू गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीसामु येचौले माथिका ३ जिज्ञासा राखेका थिए ।
नेपालमा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले २ देशबीचको सम्बन्धमा कुनै चिसोपना नआउने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो । केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री भएका बखत चीनका तर्फबाट कुओ नै बधाई दिन नेपाल आएका थिए । त्यसबेला पनि उनको राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटवार्ता भएको थियो ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताका लागि पनि कुओले केही सुझाव व्यक्त गरेका थिए । त्यस आधारमा अहिले पार्टी अगाडि बढ्न नसकेको विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीसँग उनले परिचर्चा गरेका थिए । टोलीको अन्य नेतासँगको छलफलमा भन्दा राष्ट्रपति भण्डारीसँग बढी संवाद भएको स्रोतले जनायो ।
राष्ट्रपति सीको विशेष दूतका रूपमा कुओ नेतृत्वको टोली आएको हो । टोलीले आइतवार अपराह्नै बालुवाटारमा नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेको थियो । नेकपाकै अर्काे पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग टोलीले सोमवार भेटवार्ता गरिसकेको छ ।
‘नेकपा फुट्न हुँदैन । मिलेरै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ राष्ट्रपति सीको सन्देश सुनाउँदै कुओ नेतृत्वको टोलीले दाहालसँग जिज्ञासा राख्दा दाहालले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेर कलंक बोक्ने काम गरेकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताएका थिए । दाहालपछि उक्त खेमाका अध्यक्ष नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग पनि चिनियाँ टोलीले सोही जिज्ञासा राखेको थियो ।
नेपालले भने नेकपाभित्रको विवाद, ओलीको व्यवहार र पार्टी किन यो अवस्थामा आइपुग्यो भन्ने विषयमा श्रृंखलामा टिपोट प्रस्तुत गरेको स्रोतले बतायो । सबैजसो नेतासँगको भेटमा चिनियाँ विशेष टोलीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा आफूहरूको कुनै हस्तक्षेप नरहेको, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नै चाहेको तर, नेकपाको विभाजनले आफूहरूलाई चिन्तित तुल्याएको बताएका थिए ।
‘नेकपाको विभाजनले हामी र राष्ट्रपति सीलाई समेत चिन्तित तुल्याएको छ । यो विभाजनले फेरि कतै अस्थिरतामा नेपाल जाने हो कि भन्ने विशेष चासो र चिन्ता हामीमा छ । तपाईंहरू नफुट्नोस्, मिलेरै जानुस् भन्ने हाम्रो सुझाव हो,’ विशेष टोलीले नेकपाका दुवै पक्षसँगको भेटमा व्यक्त गरेका थिए ।